ILondon Underground isivele isebenza ebusuku | Izindaba Zokuhamba
ILondon Underground isivele isebenza ebusuku
UMariela Carril | | London, Izaziso
IshubhuNjengoba besho nxazonke lapha, uhlelo lwenhloko-dolobha yaseNgilandi, uhlelo olushesha kakhulu olusebenzela inhliziyo yedolobha futhi futhi oluyingxenye yebhande lasemadolobheni azungeze iLondon. Kuyimetro endala kunazo zonke emhlabeni selokhu yavulwa ngo-1863 futhi kusukela lapho ibilokhu ikhula ngokwengeziwe kuze kube yilapho iyisithutha esisebenza kahle kakhulu.
Kodwa kuze kube manje iLondon Underground ivaliwe ebusuku: okokugcina kwenzeke ngo-1 ekuseni kuthi okokuqala kuqale ngo-5 yize ngezimpelasonto amahora abesekude kakhulu. Izindaba ezinkulu, ezilindelwe ngabantu bendawo nabavakashi abathanda iLondon, yilezo kusuka kule nyanga iqale ukusebenza ebusuku.
ILondon Underground, inkonzo yasebusuku
Kumele kushiwo ukuthi kuze kube manje iLondon ibingadingi insiza ehamba ngaphansi komhlaba ebusuku njengamadolobha amaningi aseYurophu akusilo idolobha ukulala kuze kube sebusuku. Lapha izindawo zokudlela, izinkundla zemidlalo kanye nezindawo zokukhangisa zivalwa kusenesikhathi futhi phakathi kwamabili azikho izinyathelo eziningi ezisele. Okushiywe kuvulekile ... kahle, amatekisi namabhasi anele.
Kodwa london kungumuzi obizayo futhi ukuthatha itekisi kungalimaza isikhwama sabavakashi. Kulungile, njalo kunamabhasi asebusuku kodwa kufanele wazi amashejuli futhi ungalahlekelwa yibo ngokuxaka ukubuyela kusenesikhathi ehostela, efulethini noma ehhotela. Amabhasi asebusuku agijima phakathi kwamabili futhi aphethe uphawu ngohlamvu N eceleni kwenombolo yomzila.
La mabhasi asebenza emizileni elinganiselwe ngakho-ke uma isivakashi siwasebenzisa kulula ukuba nemephu eseduze, futhi, namashejuli awo. Ayinethezekile futhi kufanele ubale ukushiya inkantini noma idisco noma indawo yaseshashalazini ngesikhathi. Ngakho-ke, yize bekufanele silinde isikhathi eside, ekugcineni kukhona Ishubhu yasebusuku.
Kodwa kanjani? Isebenza kanjani? Kukuluphi uhlelo? Iyama kuzo zonke iziteshi? Le sevisi yasebusuku yasemgwaqweni kwamenyezelwa ngonyaka we-2014 futhi usuku olukhulu lokuqala ukusebenza kwaba ngo-Agasti 2016. Isikhathi esithe xaxa futhi sesivele siphakathi kwethu: isevisi yamahora angama-24 kolayini abathile baseLondon Underground kuphela ngoLwesihlanu nangoMgqibelo ebusuku.
Lokhu kufanele kubhekwe nakho. Insizakalo yesitimela esingaphansi ebusuku izosebenza kuphela kulezo zinsuku, lezo ezinokuphila kwasebusuku kakhulu. Ishubhu Yasebusuku izobe isebenza kuCentral Line, ulayini osuka entshonalanga uye empumalanga udabule eLondon futhi unezitobhi ezithandwa kakhulu njengeLiverpool Street, Oxford Circus, Notting Hill, Tootenham Court Road, Bank noma Holborn.
Izosebenza nakuVictoria Line owela enhlokodolobha yamaNgisi usuka eningizimu uye enyakatho futhi ume e-Oxford Circus futhi kepha wengeza iVictoria, i-Euston, iKing's Cross noma iBrixton, phakathi kwabanye. Ngenyanga ezayo kuzongezwa omunye umugqa, iJubilee Line: Uhambo lwezintombi luzoba ngo-Okthoba 7 futhi luzofika ekugcineni unwebe imigqa yaseNyakatho nePiccadilly, ngasekupheleni kwekwindla.
Izindaba ezimnandi ukuthi i-Night Tube ngeke ibize imali eningi kunesevisi ejwayelekile ngaphandle kwamahora aphezulu. Kulula: amathikithi aqala ukusebenza kusukela ngosuku lokuthenga kuze kube ngu-4: 30 ekuseni ngakusasa futhi lokho kuyinto okufanele uyikhumbule. Ungasebenzisa i Ikhadi le-Oyster.
Masikukhumbule lokhu london ezokuthutha ikhadi: kuhle kakhulu ukonga imali ngezithuthi zomphakathi edolobheni. Isebenza njengekhadi lesikweletu futhi umphathi wayo unakho izaphulelo kumgwaqo ongaphansi komhlaba waseDocklands, imali yokugibela amabhasi namaloliwe amancane. Kuyikhadi elinezinketho ezimbalwa, yize okulula kakhulu ukukhokha njengoba ulisebenzisa.
Uma uhlala isonto noma inyanga lapho-ke i-Travelcard ingcono, kepha noma yini Oyster kuyisisekelo sabavakashi. Ungayithenga ku-inthanethi futhi uma kungenjalo ezitolo ezingaphezu kwezinkulungwane ezimbili zokuthengisa edolobheni. Uma uthenga inketho yokukhokha njengoba uzohamba kuzofanele ushiye idiphozi engu-5. Uma ungumfundi futhi uneminyaka engaphezu kwengu-18 ubudala, unesaphulelo esingu-30% ekhadini lezinsuku eziyisikhombisa, ikhadi lanyanga zonke kanye neTravelcar isikhathi eside.
Ngaphandle kwezinzuzo ezisobala zokuba nensizakalo yemetro yasebusuku, leyo lapho iphathi liphela unezokuthutha ezisebenza kahle, ezisheshayo neziphephile ukuhambahamba, umbuzo uthi ngabe ifanela iphakethe lezivakashi noma cha, uma kuqhathaniswa namatekisi namabhasi. Kunjalo! Wonga isikhathi futhi wonga imali. Vele kuzoba ngcono kuze kufakwe eminye imigqa kodwa ngemigqa emibili ekhishiwe sisendleleni efanele.
Kunamahhotela ashibhile eVictoria, Holborn naseWarren Street, futhi nakuLiverpool Street, ngakho-ke uma uhlala lapho usunethabhu ezandleni zakho. Futhi okungcono nakakhulu: uma ufika eLondon ngendiza ephephile yezindiza ephansi, ungena nge isikhumulo sezindiza i-gatwick. Khumbula ukuthi izitimela eziya nokubuya kuleso sikhumulo sezindiza zisebenzisa ulayini waseVictoria ngakho iNight Tube ikwenze ngcono kakhulu ukungena nokuphuma ezweni.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » London » ILondon Underground isivele isebenza ebusuku